Ejiji ọla edo na citrine - gold, silver, gilt, long, rectangular, square, pou
Osisi na citrine - 70 foto nke fashionable mara mma ọla ntị na citrine citrine
Ihe ọ bụla a na-eme na citrine na-etinye ọkụ na affability. Ụmụ nwanyị nke oge a ka na-ekwere na nkwenkwe na akụkọ ntụrụndụ ndị na-agbanye gburugburu. Dịka ọmụmaatụ, n'oge emepechabeghị anya, e kweere na onye nwe nkume ahụ chọtara amamihe ma chebe onwe ya pụọ ​​na nsogbu.
Osisi na citrine
Ọbụna n'oge ochie, a chọtara ihe ngwọta nke citrine. Site n'enyemaka ya, ha na-emeso oria ojoo na nsia . Ka oge na-aga, a malitere iji nkume ọla na-eji ọla edo mee ihe, na-emepụta ihe ndị dị na ya. Ihe kachasị ewu ewu bụ n'oge ndị eze na ndị ikpe ụlọikpe. Citrine bụ ụdị topaz, site n'àgwà nke nkume semiprecious. Ọ dị ogologo oge a kpọrọ ya topaz ọlaedo ma ọ bụ Spanish, na-enweghị aha aka ya.
N'etiti narị afọ nke 18, a kpọrọ nkume ahụ citrus, nke pụtara na lemon odo sitere na Latin. A na-ejizi zinc na mmanụ aṅụ na-edozi ya. Na mbido, a na-etinye citrine na smithies, ugbu a, ndị na-ere ahịa na-emepụta ọla na ụlọ akwụkwọ pụrụ iche site n'enyemaka nke teknụzụ ọhụrụ. Ihe dịgasị iche iche nke ngwaahịa abawanyela na ka oge na-aga ịghacha nkume agbanweela, usoro ndị a aghọwanye ihe mgbagwoju anya:
Ibe ọla edo edo na citrine mepụtara ihe oyiyi mara mma nke na-ebute ìhè anyanwụ. Akpokọta ngwaahịa ndị a na-ewu ewu na nkume ndị e kere eke, n'ihi na na okike, e nweghi ihe bara uru. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị mepụta mmepụta ihe ndị yiri nke ọma, ha ka ga-adị iche n'ọdịdị. Osisi na citrine na ọlaọcha na-emepụta onyinyo dị nro. Site na ndò oyi nke ọlaọcha, mkpuru mmiri ahụ na-eweta ìhè anyanwụ ya niile.
Ndị dọkịta ụbọchị ndị a mesiri ike na ịnweta nwere mmetụta dị irè n'ahụ akụkụ ahụ na ọrụ ụbụrụ, na-enyere aka na ehighi ụra , mee ka nchekwa dị mma. Ike nke citrine nwere ike ịmanye ndị na-agba ọgwụ, n'ihi ya, a na-eji nkume ahụ eme ihe n'udo, na-ewusi ike ma na-echebe mkpụrụ obi na-adịghị ike. Ịzụta ihe na citrine, nwanyị ọ bụghị nanị na-enweta ihe mara mma ma dị mma, ma enwere ohere iji mee ka ahụ ike ya dịkwuo mma. A kwenyere na mkpuru mmiri ahụ na-eburu onwe ya ike.
Ọnụ na citrine na ọla edo
Yellow gold na citrine-acha odo odo na-emepụta ihe dị iche iche Nchikota, zuru okè na-akwado ibe ha, na-eme ka mma ọgaranya na mara. Nna ukwu na-ejikarị citrine na-eme ihe ntinye na nkume ndị ọzọ dị iche iche, na-enye ihe oyiyi nke iwe na coquetry. Jewelers jiri fianit, nke na-agbanwe diamonds ma ghara imetụta ego nke ọla. Gold ọla ntị na citrine anya harmonious na ihe ọ bụla nlereanya:
na obere nkume;
na nnukwu nkume;
ma ọ bụ .
Osisi na citrine na ọlaọcha
Mmiri citrine dị na ọlaọcha mara mma, n'ihi na ọlaọcha nwere ndò oyi. Na nkwekọrịta dị otú a, nkume a ga-elekwasị anya ma gbanwee nwa agbọghọ ọ bụla. Ụdị ihe ndị dị otú ahụ abụghị ọnụ, ma ha dị mma. Ụdị na agba nke nkume ahụ dabeere na ihe nlereanya nke ngwaahịa a. Ọnụ ọnụ ọlaọcha kachasị mma na citrine bụ ihe oriri na oriri.
Ejiji ọla edo na citrine
Ịzụta ngwa na citrine, ọ dị mkpa iji chọpụta nkedo ahụ, ịdabere na ịtụkwasị nkume, nyochaa ihe bara uru maka ntụpọ, iji tụọ ma ọ ga-adị mfe iyi ya. Osisi ndị nwere nnukwu citrine na-adabara nwa nwanyị tozuru okè, na ọla ndị nwere obere nkume na-ejikọta otu nwa agbọghọ. Tinyere ndị nna ukwu na-ahụ maka ihe ndị na-eme ka anyanwụ jiri nkume ndị ọzọ mee ọla:
A na-ejikọta mkpụrụ osisi citrine na uwe na-acha aja aja ma ọ bụ edo edo, ihe bụ isi bụ na agba nke nkume adịghị ejikọta na ndò nke uwe ahụ. Ihe ndị dị na ịkechasị mmanya na-adaba na ihe ịchọ mma. Ngwa na citrine kwesịrị ekwesị:
ụmụ nwanyị na-acha uhie uhie na-acha akwụkwọ ndụ na agba ntụ;
acha uhie uhie.
A na - emepụta mkpụrụ osisi ndị a na mba niile nke ụwa. Mba ọ bụla na-emepụta nkọwa nke ya, na-agbakwụnye atụmatụ nke mmasị mba maka ihe ịchọ mma. N'ime oge, ihe niile na-agbanwe, mana àgwà ndị metụtara ọdịnala na-anọgide na onye ọ bụla. Jewelers nwere mmasị ịrụ ọrụ na mkpanaka a maka nhịahụ ya na nhazi, maka ịma mma na ngwaahịa na ntinye zuru okè na ọla ọ bụla eji eme ihe ịchọ mma. Nkume a na-ejikarị topaz na nkume a n'ihi na ha yiri ha. Citrine dị ụba, ma o nweghi ihe dị mma.
Umu eji akwa citrine
A ga-eji ọla ntị ejiri nnukwu nkume wuo nwanyị ọ bụla. Site n'enyemaka ha, nwanyị nwere ike imesi ike na ọnọdụ ya na ọha mmadụ. N'ihi nnukwu ike nke ihe bara nnukwu uru, ihe ịchọ mma na citrine ukwu dị mkpụmkpụ ma nwee nchịkọta nke Bekee, nke kachasị nwee ntụkwasị obi. Luxuriously anya ọla edo ọla ntị na nnukwu citrine nke na-egbuke egbuke oroma. Nkume ndị dị na ọla anaghị adaba ná ndụ kwa ụbọchị, maka uwe mgbede ga-adị mma.
Ogologo ọla ntị na citrine
Ogologo ọla-edo na-ewu ewu. Site n'enyemaka ha, ị nwere ike ile anya ọdịdị ihu . Ịdị ọcha nke onyinyo ahụ ga-enye ọla ntị edo edo na citrine na nchara ejiji. A na-achọta ọtụtụ ụdị dịgasị iche iche dị ukwuu na ọla ejiji. A na-etinye ihe ịchọ mma ogologo dịka aka iji mee ka ọ dịkwuo mfe itinye ma gbanyụọ. Ihe dị ala bụ na ụdị ngwaahịa a dị mfe ida.
Ụdị ọla ntị nke ọtụtụ ụmụ nwanyị bụ anụ. A na-ele ha anya dị ka ọla na-acha na nkume. Ọlaọcha na ọla edo ọla ntị dị ọnụ ala karịa ọla ntị ndị ọzọ na nke a. Ha kwadoro ndụ ndụ kwa ụbọchị na nnọkọ ntụrụndụ. Ntucha ndị dị otú ahụ na nsọtụ dị nkpa nke mkpara ndị ahụ, a ga-ewepụ ha n'abalị. Ejiri ihe dị iche iche na-ebu ihe dị n'elu:
Osisi na citrine na chrysolite
Chrysolite si n'asụsụ Grik bụ nkume ọla edo, ma n'eziokwu, isi ya bụ odo-acha akwụkwọ ndụ. Ụda olu nyere ya aha ọzọ - olivine, maka ọdịdị na agba mmanụ. Ekele maka odo odo na-acha akwụkwọ ndụ na-acha odo odo, ọla ntị mara mma na citrine na chrysolite ga-eme ka nwanyị mara mma ma bụrụ ndị zuru okè maka ọrụ. A ga - ahọrọ nchikota nkume a maka ụmụ nwanyị nwere aja aja ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Akara ọla na citrine
Ọnụ ọnụ ndị nwere nkume anọ na-adabere n'ogologo ndị na-eto eto, na-emesi amara na n'olu na fragility nke n'ubu. Ihe dị oké ọnụ ahịa maka ihe ịchọ mma ga-adị mma maka ndụ kwa ụbọchị. Okwute na akụkụ anọ ndị nwere nnukwu mmiri na citrine na-adabara ụmụ agbọghọ nwere ọdịdị ihu dị iche iche:
elongated, ngwaahịa na nnukwu nkume ga-enyere anya gbasaa ihu.
Umu amuru na amethyst na citrine
Amethyst - ụdị quartz, nke bụ akụkụ nke nkume ma nwee odo-acha ọbara ọbara ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ. Omenala nke ike nke ihe omuma a. Nkume na-ezo aka n'àgwà nke nnukwu ihe atụ na ọtụghị ọnụ, ma eji ya na ọla ọla ndị dị oké ọnụ ahịa:
Mgbe ọkụ dị ọkụ, amethyst nke anụ ahụ gbanwere agba ma ọ bụ mee ka ọ ghọọ nkume ọzọ dị mgbagwoju anya. N'ihi olulu mmiri, a na - enweta praziolite na-acha akwụkwọ ndụ - mgbe ọ na - ewe iwe - lemon odo citrine. Mgbe ejikọtara ya na ihe amethyst na citrine, a na-enweta amerine ịnweta. Amụ na amethyst na citrine dị mma maka ndị inyom ọ bụla, karịsịa ndị inyom mara mma nke ejiji. Lee akwa ọla edo ndị na-etinye na nkume n'ụdị okooko osisi, kpakpando na alaka. Azịza ọla edo na amethyst na citrine ga-eji ihe oyiyi ịhụnanya ma ọ bụ uwe mgbaka.
Osisi na citrine na diamond
Ịmepụta ọla na ndị ọkachamara na diamonds na-eji citrine amber-honey hue. Ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-ahọrọ obere poups na ụrọ irighiri mmiri. A na-enweta ahịa site na ngwaahịa ndị nwere nnukwu nkume citrine nke na-acha odo odo na agba odo odo na diamond. Nchikota nke bara nnukwu uru ga-eji obi ụtọ na-egwu onye nwe ya. Ntị ọla edo na citrine na diamond na-ele anya zuru oke na mgbanaka ma ọ bụ mgbanaka aka.
Ọnụ ọnụ - yiri mgbaaka na citrine
Na-etinye aka na ntanaka nwere ike ịdị n'elu ala dum, ma ọ bụ n'otu akụkụ. Ụdị ọdịdị ahụ nwere ike ịdị iche iche na dayameta. Anya nke ọma na obere ọla ntị na citrine na gilding na obere bara nnukwu uru. Ụdị ụdị ngwaahịa a ga-adaba n'usoro ejiji. Ọnụ ntị - yiri mgbaaka nke nkume dị iche iche na-enweta nkwado. N'ịbụ ndị nwere agba dị iche iche na-ejupụta, a gbanwere ọdịdị nke ọdịdị mma.
Nri ọka Mexico
Ihe nkedo silik
Ngwa ndị Crochet
Obere ihe maka nchacha na ịcha akwa
Nri kachasị mma maka ụmụ nwanyị
Ahịa nke ọla
Ngwongwo ndi ntorobịa maka ndi na eto eto
Kpochapu Paris Hilton
Ụlọ Nzukọ ahụ
Ebe a na-eji ákwà silks
Kpakpando na igbe nke ihe ndozi
Enweghi anya n'anya onye okenye - karia ime?
Uwe ogologo, obere, n'ihu
Ogologo oge tupu afọ ime ka a kwụsị?
Beyonce na nwa ya nwanyị, Jennifer Lopez, Carly Kloss na ndị ọzọ na egwuregwu bọl basketball
Oge kacha mma maka ọzụzụ
Utu - na-elekọta mgbe owuwe ihe ubi
Mmiri na-agbaze maka ọnwụ
National Museum National Museum of History Army
Olee Anfisa Chekhova dị ntakịrị?
Uwe uwe agbamakwụkwọ Zuhair Murad - ejiji ndị na-ewu ewu Lebanọn
Agba chaa chaa
Ọgwụgwọ na juices